धनी वा सफल बनाउने स्टीब जब्सका यी सरल तरिका – Agrimpost
मुख्य पृष्ठप्रविधिधनी वा सफल बनाउने स्टीब जब्सका यी सरल तरिका
धनी वा सफल बन्न कसलाई पो मन छैन र ? हामी जन्मिएपछि थाहा पाउँने भएदेखि नै धेरैजसो समय यहि कुरा सोच्छौ । तर, अपेक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिलिरहेको हुँदैन यसैले केही निराश हुन्छ । अव निराश हुनुपर्ने छैन । हामी ती तरिका बताउँदैछौ । चाहेरपनि धनी र सफल हुन नसक्नुको एउटै कारण हो हामीमा केहि न केहि कमजोरी आवश्य छ । जसले अगाडि बढ्नका लागि रोकिरहेको छ । त्यस्तो कमजोरी के हो ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? यसको ख्याल नगर्दा मानिसहरु असफलताको भागिदार बनेका छन् ।
त्यसैले सफल कसरी हुने ? धनी कसरी हुने ? भन्ने कुरामा हामीले त्यही व्यक्तिको विचार, कार्यशैलीलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, जसले वास्तवमै सफलता हासिल गरेका छन् । जस्तो कि, स्टीव जब्स । विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रान्ड ‘एप्पल’का सह संस्थापक हुन् । उनी विश्वका एक सफल व्यक्तिको रुपमा कहलिएका छन् । उनै स्टीब जब्सले कसरी सफल हुने भन्ने कुरामा आफ्नो अनुभव संसारका मानिसलाई सेयर गरिरहेका छन् । उक्त तरिका हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौ ।
हरेकले बुझौ की हामीसँग निश्चित समय छ : हरेकले बुझौ की हामीसँग निश्चित समय छ, जो तपाई आफ्नै लागि सदुपायोग गर्नुहोस् । अनावश्यक कुरामा अल्भिmएर समय बर्वाद नगर्नुहोस् । समय भनेको नै मुल्य हो । समय खेर फाल्नुभनेको मुल्य चुकाउनु हो ।
२, अरुको राय आफुमाथि निर्भर नहुनुहोस् : दोस्रोको बिचारलाई हामीमाथि त्यती धेरै हावी हुन नदिनुहोस् कि आफ्नो भित्री आवाज सुन्न नसकियोस । सधै आफ्नो दिल र दिमागले चल्नुहोस् । अरुको लहैलहैमा चल्न थाल्नुभयो भने तपाईको भविष्य डामाडोल हुनेछ ।
३, परिवर्तनको आवश्यक्ता : पछिल्लो ३३ बर्षमा मैले स्वंमलाई ऐनामा हेर्दै आएँ । तर, मैले हरेक दिन स्वंमलाई सोधे कि यदि आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भने मे के गर्न चाहन्छु ? तर, कहिले मैले यसको जबाफ सुनिन । म जान्दछु कि मैले बद्लिनुपर्छ ।
४, त्यही गर्नुहोस्, जसको मूल्य छ : मर्ने समयमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेर मर्नुमा मलाई कुनै मतलब छैन । हरेक रात ओछ्यानमा गएर राती यहि सोच्छु कि, आज पुरा दिन मैले नयाँ के गरे ? यसले मेरो जीवनमा के महत्व राख्छ ?
५, सोंच सफा राख्नुहोस् : तपाईले धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ ताकि तपाईको सोंच स्वच्छ बनिरहोस् । सोंचलाई सफा र सरल बनाउनु पर्छ । यसका लागि मिहेनत गर्नुपर्छ । मिहेनतबाट मिल्ने यस्तो सोच परिणामका लागि ठूलो मूल्य राख्छ । किनभने यो पाएर तपाई पहाडलाई पनि हल्लाउन सक्नुहुनेछ ।
६, राम्रो काम गर्नुहोस र अघि बढ्नुहोस् : यदि तपाई कुनै राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको नतिजा पनि राम्रो हुनुपर्छ । त्यसेलै यसका लागि तपाईले केहि नयाँ सोच्नुपर्छ । तपाई कहिलेसम्म एकैखाले काम गरिरहनुहुन्छ ? सोच्नुहोस् अव तपाइको लागि अलग काम के छ ?
७, विश्वास गर्नुहोस् : तपाईले कुनैपनि कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ । तपाईको साहस, संभावना, भाग्य, जीवन, उर्जा वा कर्म जसमा पनि विश्वास गर्नुहोस् । यो दृष्टिकोणले तपाईलाई कहिल्यै गिर्न दिनेछैन ।
८, अनुशासन : केहि समयसम्म मनपर्दो बिचार र नयाँ प्रौद्योगिकको खोज गरेपछि एक कम्पनीलाई परिवर्तन गर्न बर्षौ समय लाग्छ । यो सबै गर्नका लागि एकदमै अनुशासनको आवश्यक्ता छ ।
९, नडगमगाउनुहोस् : कहिले कहिले जिन्दगीले तपाईको टाउकोमा इंटा पनि बजार्न सक्छ । तर, यस्तोमा तपाईको विश्वास हराउनु हुँदैन ।
१०, उत्पादनको डिजाइन : कुनै विशेष समुदायलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन डिजाइन गर्न एकदमै मुश्किल हुन्छ । किनभने धेरैलाई थाहा छैन कि उनीहरु के चाहन्छन, जबसम्म उनीहरुलाई तपाईले देखाउनु हुनेछैन ।
११, जब कुनै समस्या आउँछ : जब कुनै समस्या आउनसाथ मानिसहरु सोध्छन् कि, यो के भयो ? जबकी सहासी युवा सोध्छन् कि यससँग हामीले कसरी जुध्न सक्छौ ?
१२, त्यही काम गर्नुहोस् जहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ : तपाईको कामले जिन्दगीलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु हो । र, सन्तुष्ट प्राप्त गर्नका लागि त्यही गर्नुहोस्, जसमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ । महान काम गर्नेको एकै तरिका छ, तपाई जे गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नुहोस् ।
कोहि म’र्न चाहँदैनन् । त्यो व्यक्ति जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, ऊ पनि म’र्न चाहँदैन । तर, मृत्युले कसैलाई बचाउँदैन । मृत्यु जीन्दगीको श्रेष्ठ आविष्कार हो । यो जीवन परिवर्तन गर्ने माध्याम हो, जसले पुरानो मेटाएर नयाँ देखाइदिन्छ ।
१३, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस् : गुणवत्तामा विश्वास गर्नुहोस् । हामीले अलग बाटो रोज्यौं । हामीलाई विश्वास छ कि, यदि उपभोक्तालाई राम्रो एवं गुणस्तरिय उत्पादन दियौ भने उसले आफ्नो पर्स खोलिरहन्छ ।
के प्लेनलाई एयरपोर्ट चाहिने छैन ?
अब एनसेलमा रिचार्ज गर्दा १ जीबीसम्म डाटा बोनस पाइने
चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकलाई
फेसबुकलाई ठुलो झट्का